Malunga nathi -Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Sanying Technology Co., Ltd.yishishini laseTaiwan elixhaswe ngemali elenze uphando, lavelisa kwaye lathengisa izixhobo zemaski phantse iminyaka engama-20. Izixhobo zemaski ezizodwa kunye nabavelisi abanxulumene nezixhobo zemaski Iimveliso zorhwebo zenkampani "SUNNY", ukwaziswa kwamalungu akumgangatho ophezulu wamazwe aphesheya, ngokuthembeka okuphezulu, uzinzo oluphezulu, ukuqondwa kwexabiso eliphantsi kunye nokuthandwa, inkonzo ekumgangatho ophezulu emva kokuthengisa sisininzi sabathengi. EJapan, Korea, eTaiwan nakwezinye iindawo ezinamanqaku enkonzo yasemva kwentengiso.
Okwangoku, inethiwekhi yentengiso yenkampani igubungele zonke izixeko eziphambili e-China. Njengesiseko semveliso, i-Shenzhen Sanying ine-R & D eyomeleleyo kunye namandla emveliso yeemveliso eziphezulu. Ukulungiselela ukuqhelana nophuhliso oluqhubekayo lweemarike kunye neemfuno zabathengi zeemveliso ezikumgangatho ophezulu, inkampani ibambelela kwifilosofi yeshishini lomgangatho wobungcali, ukusebenza ngokunyanisekileyo kunye nenkonzo enolwazelelelo, ikhawulezisa uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha, iyaphucula umgangatho wenkonzo, kunye nokuzama kwabaThengi kuyaqhubeka ukonyusa imveliso kunye nokhuphiswano kwaye basebenze ngokuzimisela.
Ifilosofi yeshishini: Ukugqwesa kwimveliso, inkonzo yokucinga kunye nexesha elifanelekileyo
Undoqo weSanyingI-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye neqela elisebenzisanayo elinamaxabiso afanayo kunye nembono yoxanduva kukhuphiswano oluphambili lweSanying.
Umoya weqela likaSanying: ngokungqongqo ekuziqeqesheni, ekuqhubekeni usukela, ekwabelaneni nge-weal kunye ne-oe, isandla ngekamva, abantu abajolise ebantwini, abathembekileyo nabanomdla, ngqongqo nangokufanelekileyo, kwaye benza ukuqaqamba kunye
Ixesha likaSanyingt: ubungcali, umdla, umgangatho ophezulu kunye nozinzo
Ujoliso lweshishini: Ukoneliseka kwabathengi 99%, izinga lokupasa uvavanyo 100%, izinga lokuhanjiswa kwemveliso 98%
Ukugqwesa kwemveliso, inkonzo ecingisisiweyo kunye nexesha elifanelekileyo
Ilaphu leBlue Static Bubble, Umatshini weMask yobuso, Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye, Ukupakisha i-Bubble Bag, Ingubo ebomvu yeBhola, Umenzi weMaski,